Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » zezindiza » I-AT&T ne-Verizon zihlehlisa ukukhishwa kwe-5G ngemuva kokukhala kwezinkampani zezindiza
I-At&T ne-Verizon ihlehlisa ukukhishwa kwe-5G ngemva kokukhala kwezinkampani zezindiza
Inkinga ukugxambukela okungaba khona kwamasiginali e-5G anama-altimeter e-radar, esiza abashayeli bezindiza ukuthi bahlale endaweni engabonakali. I-frequency esetshenziswa isevisi engenazintambo ichazwe ngokuthi “isondele” kuleyo lapho amanye ama-altimeters asebenza khona. Izinkampani zezindiza zifune indawo ephephile yamamayela amabili ezungeze izikhumulo zezindiza zase-US ukugwema lokhu kugxambukela.
AT & T futhi Verizon namuhla bamemezele ukuthi bazokuhlehlisa ukukhishwa kwemibhoshongo emisha ye-5G eduze kwezindiza "ezinye" zase-US, nakuba bengacacisanga ukuthi yiziphi, futhi basebenzisane nabalawuli benhlangano ukuxazulula ingxabano mayelana nokuphazanyiswa okungenzeka kwe-5G nokusebenza kwemikhumbi yezentengiselwano yase-US.
Abasebenzi benethiwekhi engenantambo baseMelika bathi bavumile ukubambezela ukukhishwa okuhleliwe kwesevisi ye-5G eduze nezindiza eziningi zase-US ngenxa I-Federal Aviation Administration (FAA) nokukhathazeka kwezinkampani zezindiza ukuthi ukwenza kanjalo kungabeka engozini ukuphepha kwezindiza.
I-White House isincome lesi sivumelwano, yathi "sizogwema iziphazamiso ezingase zibe yingozi ekuhambeni kwabagibeli, ukusebenza kwezimpahla kanye nokusimama komnotho wethu."
The I-Federal Aviation Administration (FAA) kanye ne-Federal Communications Commission (FCC) ayikwazanga ukuxazulula le nkinga kule minyaka embalwa edlule.
AT & T futhi Verizon baye bathi izimpawu zabo ngeke ziphazamise amathuluzi ezindiza nokuthi ubuchwepheshe busetshenziswe ngokuphepha kwamanye amazwe amaningi. Ekuqaleni bebehlele ukumisa isevisi yabo ye-5G ekuqaleni kukaDisemba futhi sebevele beyibambezele kabili ngenxa yengxabano nezinkampani zezindiza.
Ukubambezeleka kwakamuva kwenzeka ngobusuku baNcibijane, ngemuva kokungenelela kukaNobhala Wezokuthutha uPete Buttigieg kanye nomqondisi we-FAA uStephen Dickson. Njengengxenye yaleso sivumelwano, izingcingo ezimbili zavumelana ukunciphisa amandla esignali yazo eduze nezindiza zezindiza ezingama-50 zase-US izinyanga eziyisithupha, ngenkathi FAA futhi i-DOT ithembise ukuthi ngeke isakwazi ukuvimba ukukhishwa kwe-5G.
Kodwa-ke, izinkampani zezindiza zikhala ngokuthi isigcinalwazi esihleliwe sithinta kuphela imizuzwana yokugcina yendiza engu-20, futhi izinkampani zifuna indawo enkulu yokungafakwa efana naleyo eyasungulwa eFrance, enwebeka ifike kumasekhondi angama-96.
zezindiza I-Federal Aviation Administration I-Federal Communications Commission White House